Shax laga sameeyey xiddigaha waa weyn ee ka soo baxay Akadeemiga Kooxda Barcelona… (Messi oo hoggaaminaya & Icardi oo ku jira) – Gool FM
Shax laga sameeyey xiddigaha waa weyn ee ka soo baxay Akadeemiga Kooxda Barcelona… (Messi oo hoggaaminaya & Icardi oo ku jira)
(Barcelona) 23 Abril 2020. Waxaa la soo bandhigay shax laga sameeyey xiddigaha waa weyn ee ka soo baxay Akadeemiga Kooxda Barcelona, waxaana hoggaanka u haya Lionel Messi, iyadoo sidoo kale uu ka soo muuqday Icardi.
Shaxdan ayaa lagu soo doortay xiddigaha ka soo baxay Akadeemiga kooxda Barcelona ee hataan ciyaara, isla markaana weliba sameynaya bandhigga cajiibka ah.
Akadeemiga Barcelona shaxdaan laga sameeyey xiddigaha haatan ciyaara kubadda cagta ee bandhigga wacan ku jira ayaa lagu qiimeeyey 440.7 milyan oo euro.
Dhammaan ciyaartoyda shaxdaan ka soo muuqday waa kuwa hadda ciyaaraha ku guda jira oo aan fariisan, waxaana lix ka mid ah safkaan ay hadda u dheelaan isla kooxda Barcelona.
Messi, Icardi iyo Fati ayaa weerarka horkacaya, Iniesta, Thiago iyo Busquets ayaa khadka dhexe ku jira, Pique, Bartra, Roberto iyo Alba ayaa daafacyada loo soo xushay, halka goolka uu shaxdaan ugu jiro Goolhaye Onana.
SHAXDA OO DHAMMAYSTIRAN HALKAAN HOOSE KA EEG:-
Thomas Müller oo aan doonaynin inuu Kabtan u noqdo Bayern Munich & Halka arrin oo uu rabo inuu sameeyo
Maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo Neymar Jr si uu dib ugu laabto Kooxda Barcelona xagaaga?